Guddiga Doorashooyinka oo go’aan ka soo saaraya dib u doorashada kuraasta banaan | Dayniile.com
Guddiga Doorashooyinka oo go’aan ka soo saaraya dib u doorashada kuraasta banaan
Jan. 12 WARKA MAANTA Comments Off on Guddiga Doorashooyinka oo go’aan ka soo saaraya dib u doorashada kuraasta banaan
Guddoomiyaha Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo (Yareey) oo ku sugan magaalada Dhuusa-mareeb ayaa sheegtay in go’aanop rasmi ah ka soo saari doonaan dib u doorashada kuraasta banana ee Golaha Shacabka.
Ilaa Afar kuri oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa banaan waxaana socnayay qorshe dib u doorasho ah, kadib markii muran uu ka dhashay, Maxkamadda Sare-na ay amartay in dib loo dhigo.
Qoraal ka soo Maxkamadda Sare ee dalka ayaa lagu amray in Guddiga Madax banaan ee Doorashooyinka Qaranka ay hakiyaan doorashada kuraasta banaanaatay ee xildhibaanada Golaha Shacabka,
Xaliimo (Yareey) aha Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka oo warbaahinta kula hadashay magaalada Dhuusa-mareeb ayaa sheegtay xubnaha Guddiga in maalinta Axada ah ay shiri doonaan, kadibna ay go’aano ka soo saari doonaan kuraasta muranka uu ka taagan yahay.
Sidoo kale Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa sheegtay in codsi uu kaga yimid Guddoonka Golaha Shacabka, kaasi oo ah in la dadejiyo doorashada Afarta kursi ee ka banaan.
Dhanka kale War Saxaafadeed shalay ay soo saareen Golaha iskaashiga Dowlad Goboleedyada ayaa lagu muujiya walaaca ay ka qabaan daahitaanka ku yimid waqtigey eheyd in la soo dhameystiro Kuraasta ay ka dhinteen Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo kuwa ay baneeyeen masuuliyiinta Dowladda.
Golaha ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan hanaanka dowladda ay dooneyso iney ku buuxiso kuraasta banaan oo ay sheegeen in mudo Lix bilood ah ay banaan yihiin kuraasta iyo go’aanka Maxkamada sare ay mar kale dib ugu sii dhigtay waqtiga la qaban lahaa doorashada lagu buuxinayo Kuraasta banaan.
Waxa ay ugu baaqeen Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka iney eegaan baahida ay uqabaan beelaha qaar maqnaanshaha matalaada ay ku lahaayeen Baarlamaankan 10-aad.
← Xaaf oo ka hadlay booqashada Farmaajo ee Galmudug
Sheekh Shaakir oo magacaabay Guddiga Amniga →